7 गन्तव्य विश्वव्यापी | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा इटाली >7गन्तव्य विश्वव्यापी
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा चीन, रेल यात्रा चेक गणतन्त्र, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा इटाली
(Last Updated On: 07/06/2021)
यूरोपको महलहरू र पुरानो पुराना शहरहरूबाट रोमांचक ह Hongक Kongसम्म, यी7दुनिया भर मा प्रेम गन्तव्यहरु तपाइँको प्रेम मा बनाउनेछ. यी7प्रेम गन्तव्यहरू तपाइँको प्रेम कथाको एक अद्भुत अध्यायको लागि सही सेटि। हो, र जादू पुनर्जीवित गर्न.
1. सबैभन्दा रोमान्टिक प्रेम गन्तव्य विश्वव्यापी: पेरिस
यदि तपाइँ "प्रेम" को लागि शब्दकोशमा समानार्थी शब्दहरू हेर्नुहुन्छ भने, तपाईं पेरिस ठूलो अक्षरहरुमा लेखिएको पाउनुहुनेछ. यसको अकल्पनीय आकर्षण, रातको सुन्दरता, patisserie, र रोमान्टिक चित्रहरूको लागि धेरै स्पटहरू, पेरिसलाई एउटा बनाउनुहोस्7दुनिया भर मा प्रेम गन्तव्यहरू.
सुन्दर ला मारैस छिमेकको माध्यमबाट टहलँदै, सडक संगीत सुन्दै, वा सबैभन्दा सुन्दर ठाउँहरूमा पिकनिक भएको, पेरिस रोमान्सको प्रतीक हो. हो, यो पेरिस माथि छ कि एक आश्चर्य को रूप मा आउन सक्छ हनीमून गन्तव्य यूरोपमा, र तपाईंलाई लाग्ला कि यसका सबै रोमान्टिक स्पटहरू पूर्ण रूपमा बुक हुनेछन्. तथापि, यो सुन्दर शहर दागले भरिएको छ, जहाँ तपाईं आफ्नो प्रेम चिच्याउन सक्नुहुन्छ, वा एक पर्यटन मुक्त तस्वीर छ. पेरिस निस्सन्देह परम प्रेम शहर हो, सबै जोडीहरूको लागि, इन्द्रेणीका सबै र inहरूमा.
पेरिसमा गर्नुपर्ने सबैभन्दा रोमान्टिक चीजहरू
म्यूजे कर्नाभलेटको वरिपरि घुम्नुहोस्, नहर सेन्ट-मार्टिन मा चुम्बन, र प्रतीकात्मक चैम्प्स डे मार्स स्पेसमा रोमान्टिक पिकनिकको आनन्द लिनुहोस्.
2. इटालीमा सर्वश्रेष्ठ प्रेम गन्तव्य: भेनिस
जबकि भेनिस यूरोप मा एक धेरै पर्यटन शहर हो, तपाईले धेरै लुकेका ठाउँहरू भेट्टाउनुहुनेछ, जहाँ एक gelato वा पिज्जा साझा गर्न को लागी. शहर को पुलहरू तपाईं र तपाईंको प्रेमीलाई अफ-पिट गरिएको-मार्ग कुनाहरूमा लैजान्छ, गल्लीहरू, र स्थानीय रेस्टुरेन्ट, जहाँ तपाईं खानु सक्नुहुन्छ इटालियन भोजन, र टोस्ट इटालियन वाइन वा अपेरोलसँग प्रेम गर्न.
भेनिसमा उत्तम रोमान्टिक दिन धेरै ब्रिजहरूको अन्वेषणबाट सुरू हुनेछ. त्यसपछि, तपाईं को लागि एक पिज्जा खाउन सक्छ2र gelato. यो सिफारिस गरीन्छ कि जानुहोस्2मनमोहक टापुहरू बुरानो र मुरानो, दिनको दोस्रो आधा लागि, पर्यटकहरूको भीड पछि गए. यो बाटो, ती सबै टापुहरू आफ्नै निम्ति हुनेछन्, रोमान्टिक चित्रहरूको लागि.
भेनिसमा गर्नुपर्ने सबैभन्दा रोमान्टिक चीजहरू
डोरसोडुरो वरिपरि घुम्नुहोस्, स्थानीय छिमेक, वा क्यान्टिना डो स्पडेमा खाना, जहाँ कासानोभा बेलुकाको खाना प्रयोग गर्थे. त्यसपछि, तपाईको रोमान्टिक खाना खाजा गर्न सकिन्छ लुकाउन बुरानो टापुमा, र आइतबारमा गोन्डोला सवारीको मजा लिनुहोस्. तपाइँ तपाइँको रोमान्टिक छुट्टी एक को साथ शुरू गर्न सक्नुहुन्छ रोमान्टिक रेल यात्रा लन्डन वा स्विजरल्याण्डबाट भेनिस सम्म.
3. युरोपमा गन्तव्यहरू: ताल नाइस
घाम अल्प्समा अस्ताउँदैछ, ताल मा प्रतिबिम्बित, र तपाईं आफ्नो प्रिय संग संग टहलिरहनुभएको छ प्रेमीहरूको पैदल यात्रा, Varenna मा प्रेमीहरुको ट्रेल. पक्कै तपाईं सहमत हुनुहुन्छ कि यो बनाउँछ ताल कोमो एक अविस्मरणीय प्रेम गन्तव्य रोमान्टिक भगदडका लागि 2.
Varenna को आकर्षक शहर को अतिरिक्त, Bellagio, र Vezio लेक कोमोको शानदार दृश्य र प्रशान्त रोमान्टिक स्पट प्रदान गर्दछ.
सबैभन्दा रोमान्टिक चीजहरू लेक कोमोमा गर्नु पर्ने
मोन्टे क्रोसिओनमा जादुई पिकनिकका लागि सम्पूर्ण रूपमा लारी पर्वतहरूमा सुपर रोमान्टिक पैदल यात्राको आनन्द लिनुहोस्. यदि तपाईं एक एड्रेनालाईन मायालु जोडी हुनुहुन्छ, तब तालको माथि समुद्री जहाज उडानले ती पुतलीहरूलाई जगाउँदछ!
फ्लोरेन्स एक ट्रेन संग कोमो गर्न
एक ट्रेन संग मिलान कोमोन
एउटा ट्रेनको साथ ट्युरिन
एक ट्रेन संग जेनोवा कोमो
4. चीनमा गन्तव्यहरू: हंगकंग
आधुनिक, रोमाञ्चक, र आकर्षक, ह Hongक Kong संसारकै सबैभन्दा रोमान्टिक शहरहरू मध्ये एक हो. शहरको गगनचुम्बी भवनहरू, र टापुहरु, चित्रहरु को लागी आश्चर्यजनक दृश्य स्पटहरु प्रदान गर्दछ जुन तपाइँको प्रेमलाई कैद गर्दछ. ह Hongक Kong दिनको उज्यालो र रातको बत्तीमा सुन्दर छ, सूर्यास्त र सूर्योदय, धेरै रोमान्टिक गतिविधिहरू प्रदान गर्दै, तेसका लागि दुईको लागि आराम छुट्टी, वा एक महाकाव्य साहसिक, माथि राख्दै7दुनिया भर मा प्रेम गन्तव्यहरू.
ह Roक Kongमा सबै भन्दा रोमान्टिक चीजहरू हुन्छन्
उत्तम रोमान्टिक दिन भिक्टोरिया हार्बर वरिपरि क्रूजको साथ शुरू हुनेछ, वा Repulse Bay Sandy समुद्र तटहरूमा पिकनिक. अपरान्हमा, तपाईं एक निजी कुकिंग वर्ग लिन सक्नुहुन्छ, र सूर्यास्तमा प्रेम गर्न तपाईंको चश्मा बढाएर समाप्त गर्नुहोस्.
5. गन्तव्य विश्वव्यापी: अस्ट्रिया
अस्ट्रिया, महलहरूको भूमि, अद्भुत बगैंचा, र मनमोहक शहरहरू, यूरोप मा एक लोकप्रिय प्रेम गन्तव्य हो. यदि तपाईं भीडबाट भाग्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसो भए हलस्ट्याट उत्तम गन्तव्य हो, अरु बाहेक भियनाबाट अद्भुत दिनको यात्रा.
इन्सब्रुकर जस्ता आश्चर्यजनक प्रकृति भण्डारहरूले अस्ट्रियाका पहाडहरू र उपत्यकाका सबै भन्दा सुन्दर दृश्यहरू प्रदान गर्दछ, एक रोमान्टिक वृद्धि को लागी. साथै, खुशीको पछि-पछि पौराणिक प्रेम कथाहरूको लागि उत्तम स्थान हो कि आकर्षक प्राचीन शहरहरू. तथापि, यदि तपाईं अधिक शहरी पलायन चाहानुहुन्छ भने, त्यसोभए भियना रोमान्टिक साताको लागि एकदम उत्तम हुन्छ. यसबाहेक, भियना एक हो सब भन्दा LGBT- अनुकूल गन्तव्यहरु, त्यसैले यसले सबै जोडीहरूलाई स्वागत गर्दछ, कुनै पनि सम्बन्ध स्थिति मा, र केवल तपाइँ र तपाइँको अर्को महत्वपूर्णको लागि पर्खँदै.
सबैभन्दा रोमान्टिक चीजहरू अष्ट्रियामा गर्नु पर्ने
अष्ट्रियामा एक रोमान्टिक दिन एक स्थानीय क्याफेमा बिहानको खाजामा अस्ट्रियन स्ट्राउडलबाट सुरु हुनेछ. त्यसपछि, एक अस्ट्रिया बगैचा वा महल मा एक टहलको लागि बाहिर टाउको. साथै, यदि तपाईं स्पोर्टी जोडी हुनुहुन्छ भने अस्ट्रिया एल्प्समा वृद्धि, आदर्श हुनेछ.
6. गन्तव्य विश्वव्यापी: प्राग
पेटिट र आकर्षक, प्राग एकदम रोमान्टिक छ र सही रूपमा हाम्रो मा एक ठाउँ हो7संसारमा सबै भन्दा राम्रो प्रेम गन्तव्यहरू. हो, यो पर्यटकहरु को भीड छ, तर त्यहाँ धेरै दृष्टिकोण र हरियो पार्क छन्, यात्रुहरूको भीडबाट बच्न, र अझै मजा लिनुहोस् पुरानो प्राग को सर्वश्रेष्ठ.
प्यारा सानो बारहरू, शानदार पुलहरू, र माला स्ट्राना छिमेक रोमान्सका लागि उत्तम सेटिंग हो. जबकि प्राग यूरोप मा सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य मध्ये एक हो, त्यहाँ धेरै गोप्य ठाउँहरू छन्; मोहक मलाला स्ट्राना छिमेक, र शहर दृश्य संग पार्क, पलाकी ब्रिज, केवल एक हो लुकेका रोमान्टिक केहि.
प्रागमा गर्नका लागि सबैभन्दा रोमान्टिक चीजहरू
माला स्ट्रानामा टहल, ब्ल्याटभा खोला द्वारा बियर, सहरका विचारहरूका साथ डिनर, र हेमिंग्वे बारमा ककटेलहरू.
7. गन्तव्य विश्वव्यापी: ताल ताल इंग्ल्याण्ड मा
जब एक ठाउँ प्रेरित विलियम वुड्सवर्थको रोमान्टिक कविता, त्यसो भए यो एक शीर्ष प्रेम गन्तव्य हो. साँच्चै, तपाईले देख्नुहुनेछ कि पश्चिम इ England्ल्याण्डको ताल भूमि अत्यन्तै रोमान्टिक छ. धन्यबाद6अंग्रेजी ग्रामीण इलाका र ल्यान्डस्केपको प्रकृति भण्डार, र 16 उत्साहजनक तालहरू.
कुम्बरिया क्षेत्रमा अवस्थित छ, तालको भूमि इ England्ल्याण्डको सब भन्दा सुन्दर क्षेत्र हो. त्यसैले, पहाडहरू हुँदै पर्वतारोहण गर्दै, ताल र टार्नहरूमा, संसारमा गर्नलाई सबैभन्दा रोमान्टिक चीज मध्ये एक हो. तपाईंले एक जादुई जेन अस्टेन उपन्यासमा प्रवेश गरिरहनु भएको जस्तै महसुस गर्नुहुनेछ, जहाँ प्रेमले सबै अवरोधहरूलाई खण्डन गर्छ.
Cumbria मा सबै भन्दा रोमान्टिक स्थानहरु
केसविकको ताल, ताल द्वारा पिकनिक गर्न तल एक अद्भुत वृद्धि को लागी. साथै, हेल्वलिन चोटी, र झरना पूर्ण रूपमा दुईका लागि काल्पनिक ठाउँहरू हुन्.
यी7प्रेम गन्तव्यहरू तपाईंको सम्बन्धलाई मसाला गर्न उत्तम स्थानहरू हुन्. यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी यी काल्पनिक र रोमाञ्चक प्रेम गन्तव्यहरूमा तपाईंको रोमान्टिक पलायन योजनाको लागि सहयोग गर्न हामी खुशी हुनेछौं.
के तपाईं हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "विश्वव्यापी Love प्रेम गन्तव्यहरू" तपाईंको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fne%2Flove-destinations-worldwide%2F- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
गन्तव्यहरू प्रेम LoveDestinations रोमान्टिडेस्टिनेसनहरू RomanticvacationEurope weddinginEurope
शीर्ष5शहर उत्तम रात्री जीवन युरोप साथ
ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्वीडेन, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, ट्रेन यात्रा सल्लाह, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप
ट्रेन किन एउटा परिवहन भएको Safest मोडहरू छ
ट्रेन द्वारा व्यापार यात्रा, ट्रेन यात्रा, यात्रा युरोप
ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, यात्रा युरोप